Dilaagii fagaaraha Stureplan ma laga soo deyn doonaa xabsiga 2016? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Per-Olof Sännås/TT.
Dilaagii fagaaraha Stureplan ma laga soo deyn doonaa xabsiga 2016?
La daabacay tisdag 11 februari 2014 kl 13.42
Tommy Zethraeus oo horay fagaaraha Stureplan ee bartamaha Stockholm dad ugu dilay ayaa hadda xabsi-daayin lagu xukumay loogu beddelayaa 33 sano oo xabsi ah, sida laga soo xigtay maxkamad degmo oo arrintaan go’aan ka gaartay.
Haddii la raacayo qaynuunka in qofka shuruud la soo daayo haddii uu dhammaysto saddex meelood oo meel ciqaabtii lagu xukumay, waxaa dhici karta in Zethraeus xabsiga laga soo daayo sannadka 2016. Taas oo la micne ah in uu xabsiga ku sii jiri doono laba sano iyo bar.
Go’aankaan ay maxkamadda degmadu gaartey ayaa rafcaan looga qaadan karaa maxkamadda rafcaanka. Xeerilaaliyaha ayaa ka soo horjeestey wixii go’aan oo ninkaan xabsigiisa lagu dhimayo intii ay wadahadaladu ka socdeen maxkamadda horteeda.
Maxkamaddu waxay eegtay in intii uu xabsiga ku jirey uu ka qaybqaatey barnaamijyo dhaqancelin ah oona uu dhaqan wanaagsan muujiyey laga soo bilaabo sannadkii 2006, isla markaasna uu fiican uga soo baxay waxbarasho heer sare ah.
Ninkaan xabsi-daayin ku xukuman ee Zethreaus ayaa horay u soo gudbiyey codsi uu ku doonayo xabsigiisa laga dhigo mid waqti ku xaddidan. Wuxuuna warqaddii codsiga ku qoray in uu dareensan yahay "qoomameyn ama shallayto xooggan iyo sharaf-xumo weyn ".
Waxay ahayd bishii diseember ee sannadkii 1994 kolkii uu fagaaraha Stureplan toogasho ugu dilay afar qof. Dilkaan oo ka dhacay agagaarka maqaayadda Sturekompaniet wuxuu ka dambeeyey kolkii isaga iyo laba qof oo la socdey loo diidey in ay galaan maqaayaddaas. Nin ilaalo ka ahaa maqaayadda iyo saddex dumar ah oo martida ka mid ahaa ayaa halkaask u naf-baxay kadib markii Zethreaus rasaas oodda uga qaadey iridda maqaayadda. Dad kaloo badan ayaa dhaawac ka soo gaarey rasaastii iyo burburkii muraayadaha.
Maxkamadda rafcaanka ee Svea ayaa xukunkeedii ku caddeysey Zethreausuu ridey 20 xabbadood oo uu uga gol lahaa in uu dad nafta uga jaro. Waxaana lagu xukumay dilka afar qof iyo isku day dil farabadan.
Tommy Zethreaus oo maanta buuxsanaaya 44 sano ayaa xabsi ku soo jirey muddo 19 sano ah.